पोखरा १६ मा दुई वर्ष भित्र ३० करोडको विकास निर्माण : - Googlepokhara
पोखरा १६ मा दुई वर्ष भित्र ३० करोडको विकास निर्माण :
googlepokhara	प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १२, २०७६ समय: १३:००:०७
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ मा विकासको गति तिव्र रुपमा अगाडी बढिरहेको वडा अध्यक्ष जिवनप्रसाद आचार्यले दावी गरेका छन् । वितेको पाँच वर्षमा हुन नसकेको विकास आफ्नो कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमा गरिएको उनले दावी गरे । आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरि दुई वर्षको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका उनले वडाको विकासका खातिर महत्वपुर्ण योजनाहरु सम्पन्न गरिएका बताए । भुगोलका हिषावले पोखरा महानगरपालिकाको सवैभन्दा ठुलो वडाका रुपमा रहेको वडा नं. १६ मा सडक निर्माण, स्तरउन्नती, नयाँ ट्रयाक खोल्ने लगायतका कयौन भौतिक पुर्वाधार निर्माणका योजनाहरु सम्पन्न गरिएका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार घोर्कुना खोलाको पक्की पुल निर्माणका लागी ४ करोडमा टेण्डर स्विकृत भई निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
यस्तै महेन्द्रगुफा देखी मौजा सम्मको बाटो निर्माणका लागी ७ करोडमा सम्झौता भईसकेको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा पोखरा १६ मा करिब ३० करोड बराबरको विकास भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । पुर्वाधार विकासका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन, खानेपानी, कृषी लगायतमा वडाको प्रत्यक्ष लागनीमा विकास तथा सुधारका कामहरु गरिएका छन् । वडामा व्यवस्थित बस्तिविकास, कृषीयोग्य भुमिको संरक्षण र मानवसंसाधन विकासका लागी समेत कतिपय अवस्थामा अन्तर सरकारी निकाय बिचमा हुने समन्वयको अभावका कारण नीतिगत समस्याले कठिनाई हुने गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
शहरी तथा ग्रामिण दुवै क्षेत्रमा फैलिएको वडा नं. १६ मा १७ हजार जनसंख्या र १३ हजार मतदाता रहेका छन् । वडा अध्यक्ष आचार्यका अनुसार वडामा महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरुको संख्या बढि देखिएको छ । समग्र पोखराको विकासका लागी वडाहरु समृद्ध हुन जरुरी रहेको बताएका उनले पोखरा विकासको जिम्मेवारी प्रत्येक पोखरेलीहरुको रहेको उल्लेख गरे । विकासका लागी सकारात्मक प्रतिष्पर्धामा विस्वास गर्ने उनले एक्लै हिडेर प्रथम नभईने तर्क पनि गरे । जनप्रतिनिधिहरुले जनता समक्ष गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।